ATTO Haneho vokatra vaovao momba ny fifandraisana fitehirizana vaovao @IBCShow - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » ATTO Haneho vokatra vaovao fitehirizana vaovao ao @IBCShow
ATTO Haneho vokatra vaovao fitehirizana vaovao ao @IBCShow
Ny fifandraisana dia zava-dehibe amin'ny fahatsinjovana ny fahombiazan'ny teknolojia. Izy io dia mety ho manan-danja kokoa amin'ny alàlan'ny fivoarana mitohy izay misy ny kolontsaina data nomerika ankehitriny rehefa ny fitantanana sy ny fitahirizana dia mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny fitantanana ny angon-drakitra. Arakaraka ny itomboan'ny habetsaky ny angon-drakitra dia mihamitombo haingana, avy eo dia ny fomba sy ny tinady ny fomba fitahirizana sy anaterana azy. ATTO NY Slogan orinasa dia ny "The Power Behind the Storage," ary amin'ny ankapobeny, efa nifanaraka tamin'io filokana io izy. Hatramin'ny nivoahan'ny genesis tamin'ny volana Novambra ny 1988, ATTO Technology dia nahomby tamin'ny famitana vahaolana avo lenta farany amin'ny kalitao ho amin'ny fivarotana sy hitantanana ary hanomezana data.
Amin'ny maha-mpanamboatra mpamatsy mpampiantrano, mpanamboatra tambajotra, mpanamboatra fitahirizana, ary mpanamboatra ThunderboltTM, ny ATTO dia tsy nahomby mihitsy tamin'ny fampifandraisana avo lenta amin'ireo fifandraisana fitehirizana rehetra, anisan'izany ny Fiber Channel, SAS, SATA, iSCSI, Ethernet, NVMe ary Thunderbolt. Raha misy orinasa afaka miaina amin'ny iraka ampanaovina azy kokoa noho ity goavan'ny teknolojia ity, dia ny ATTO mihitsy no "hery manohitra ny fitahirizana." IBC 2019 federasiona latsaky ny iray volana dia haneho ny ATTO bebe kokoa ny antony ahafahan'izy ireo mihaona ny 4K sy ny 8K famoronana votoaty amin'ny fampifandraisana ny votoatin'ny tamba-jotra sy ny tamba-jotra rehetra rehefa maneho ny roa amin'ireo vokatra vaovao fitehirizam-pamokarana vaovao sy tena feno fanavaozana. Ireo vokatra vao nampidirina ireo dia hanaparitaka bebe kokoa ny antony nahalasan'ny orinasa niampita ny IT sy ny haino aman-jery sy ny fialamboly izay tsy misy fivoaran'ny teknolojia ara-teknika ary fitomboana mitohy amin'ny fitantanana data sy fitahirizana angon-drakitra.
ThunderLink NS 3252 Thunderbolt 3 mankany 25Gb Ary ATTO 360 dia manao ny laza ho azy ireo ao amin'ny BC 2019
Hatreto dia aloha daholo Ny vokatra Thunderbolt ATTO dia naneho ny fahaizan'izy ireo hampiasa ny teknolojia streaming data avo lenta, izay miasa tsara amin'ny fampivoarana tanteraka ny fizotran'ny CPU mba hahafahana mandefa fitaterana fahatsiarovana sy azo ianteherana miaraka amin'ny fampisehoana maharitra farany. Ankehitriny, amin'ny famoahana ny vaovao kotrokaLink NS 3252 Thunderbolt 3 mankany 25Gb, ireo manam-pahaizana momba ny teknolojia dia ho talanjona amin'ny hoe azo antoka ny fivoaran'ny fifandraisana be dia be izay tsy manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana tsy fahita firy ary ny fampifandraisana mampivadika amin'ny tontolo famoronana votoaty avo be. Izy io dia ho toy ny fandehanana fampifandraisana be dia be ho an'ny vaovao nambara iMac Pro®, ny Apple Mac Pro®, ary Mac mini®. Ity vokatra Thunderbolt vaovao ity dia manana tombony ihany koa amin'ny fanitsiana seranan-tsambo roa, endri-pivoarana ambany endrika ary fifandraisana Thunderbolt 3. Ny ATTO ThunderLink® NS 3252 25GbE adapter bandwidth dia manohana ny famindrana rakitra horonan-tsary 4K ary aseho amin'ny marika miaraka amin'ny fampidirana ireo mavitrika SFP28 azo halatra. Aroso ihany koa ny fampidirana ao amin'ny IBC 2019 ATTO 360 Fanaraha-maso, Fanaraha-maso sy rindrambaiko rindrambaiko, izay fitaovana iray kendrena amin'ny fanatsarana ny tambajotra Ethernet, izay manam-pahaizana manokana amin'ny famohana ny tena tanjaky ny ATTO FastFrameTM ary ny mpanamory ThunderLink.
Inona no andrasana amin'ny ATTO amin'ny IBC 2019
Fampivoarana aretin'izao tontolo izao, haitao fampahalalam-baovao amin'ny ATTO Technology, Inc.
Miaraka amin'ireo vokatra roa mahavariana ireto herinandro vitsy monja tsy ho voatazona, tsy misy fanontaniana raha afaka manolotra interface mora foana amin'ny ATTO ny ATTO rehefa miresaka bebe kokoa amin'ny fomba. Tsotra ny valiny, ary noho ny fahaizan'ny orinasa amin'ny tambajotra fitehirizana, miaraka amin'ny fahafahan'izy ireo hanangana ny fitaovana sy ny teknika rehetra amin'ny alalàn'ny ekipa injeniera tsy manam-paharoa. Ny fomba fijery optimista ao ambadik'ity fanovana ity dia tohanan'ny fanohanana bebe kokoa Jeff Lowe izay miasa amin'ny Business Development, Media Technologies at ATTO. Nanambara izany i Lowe "Ny vokatra vaovao asehontsika amin'ny IBC amin'ity taona ity dia vokatry ny ATTO manompo ny tsenan'ny Media & Entertainment amin'ny telopolo taona mahery," "Fantatry ny mpampita ny filazam-baovao fa ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana toy ny ATTO dia mahatakatra ny làlan-dry zareo manokana ary afaka manome vahaolana tsara indrindra." Tsy misy fisalasalana ny fahatokisan'i Lowe amin'ity volana septambra ity raha haneho ny ATTO bebe kokoa ny fahafahan'ny vokatra ary ny fomba ahafahan'izy ireo mamoaka ny fahafenoan'ny tambajotran'ny famokarana sy ny fampifandraisana.
Ny fihaonambe IBC 2019 dia hatao amin'ny volana septambra 13-17 ao amin'ny RAI Amsterdam Convention Center any Amsterdam, Holanda, ary ny fampirantiana TheTOTO Technology dia hatao miaraka 7.A26. Ireo rehetra manatrika dia entanina mafy tokoa hisoratra anarana ao amin'ny IBC 2019 avy hatrany.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba ahafahan'ny ATTO hanomezana fiasa mahomby amin'ny asa mahomby, dia jereo avy eo: www.atto.com hanana fahalalana bebe kokoa momba ny antony nandritra ireo telopolo taona lasa izay, nahomby izy ireo tamin'ny maha-mpitarika manerantany azy amin'ny serivisy sy ny fampifandraisana, fitadiavana fametrahana vahaolana amin'ny fotodrafitrasa momba ny tontolo iainana an-tsokosoko.
ATTO 360 ATTO Technology CES2017 tahirin-kevitra Data Handeling Data Storage Digital Nirvana HOAN'NY Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor IBC ibc 2019 Jeff Lowe fanaraha-maso ny haino aman-jery MStar SoftAtHome Spears & Arrows Storage Ny Fandikàna Seho thunderbolt Thunderlink TVU Networks Variant Systems virtoaly zava-misy	2019-08-21
Previous: NAB Show New York: Ny fanangonana tanteraka amin'ny sehatra indostrian'ny indostria
Next: Argosy dia manambara ny tamba-jotra IP sy ny fanamboarana fotodrafitrasa fibre